FBC - Dhaabbilee seeran ala shaqaxoota bu’uuraa raabsaa turanirratti tarkaanfin fudhate
Dhaabbilee seeran ala shaqaxoota bu’uuraa raabsaa turanirratti tarkaanfin fudhate
Finfinnee, Ebila 4,2010 (FBC) – Dhaabbilee seeran ala shaqaxoota bu’uuraa raabsaa turanirratti tarkaanfiin fudhatamuu Ministeerri Daldalaa beeksise.
Dhaabbileen tarkaanfin irratti fudhatames waldaalee shamattootaa, dhaabbilee daldala qinxaaboo dhuunfaa, suuppar maarkeetotaa fi warshaaledha.
Dhaabbileen kanneen sukkaara, zayita nyaataa fi daakuu hawaasaf akka raabsan filatamaniit turan.
Ministeera Daldalaatti daayreektarri daayreektoreetii inispeekshinii fi reegulkaatoorii gabaa fi dhaabbilee obbo Kaasaahuun Mulaat akka jedhanitti, seera qabeessummaa hojii isaanii mirkaneessuuf sakattoon dhaabbilee 163 irratti gaggeeffameera.
Finfinneetti waldaalee hojii gamtaa shamattootaa 26, suuqota qinxaaboo 22 irratti sakattoon gaggeeffamee; waldaalee hoji gamtaa shamattootaa 21 fi suuqota qinxaaboo 20 irratti tarkaanfin akka fudhatamu bulchiinsa magaalichaaf darbeera.
Suupparmaarkeetonni 48 sukkaara sirnaan raabsaa jiraachuun sakatta’amee, 47 seeran ala osoo hojjetanuu irra ga’ameera.
Kanarraa kan ka’e afurtamii torbanuu sukkaara akka hin raabsine dhoorkamaniiru.
Warshaalee zayita akka galteetti fayyadaman 8 irratti sakattoon gaggeeffamee tarkaanfin akka irratti fudhatamuuf adeemsarra jiru.
Warshaalee sukkaara akka galteetti fayyadaman 59 irratti sakattoon gaggeeffamee; 2 sukkaara akka hin arganne, 5 qorannaan dabalataa akka irratti gaggeeffamu, 52 ammooo ga’ee isaaniirraa kuntaalli 14,205 akka irraa hir’ifamu taasifameera.
Wiirtuleen raabsaa shaqaxootaa kanaan dura 32 turan bara 2010 120 ol qaqqabaniiru.
Oduuwwan Biroo « Federeeshinichi yaa'ii waliigalaa 10ffaa isaa gaggeessaa jira	Warshaan Biqila Asallaa bu’a qabeessummaa fi carraa hojii uumuuf ni hojjeta jedhame »